Robert Lewandowski oo ka hadlay fursadaha Ballon d&rsquo;Or & mustaqbalka Bayern Munich | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Robert Lewandowski oo ka hadlay fursadaha Ballon d&rsquo;Or & mustaqbalka Bayern Munich
Robert Lewandowski oo ka hadlay fursadaha Ballon d&rsquo;Or & mustaqbalka Bayern Munich
Weeraryahanka Bayern Munich Robert Lewandowski ayaa qirtay inuu ku faanayo inuu ku guuleysto Ballon d’Or 2021 ka dib labo sano oo qurux badan oo ka koobnaa guulo uu gaaray.
33 jirkaan ayaa ka hawlgalayay heerka ugu sarreeya ciyaarta in ka badan toban sano, isaga oo meel saaray difaacyada Bundesliga iyo Champions League, sanadba sannadka ka dambeeya Bayern iyo Borussia Dortmund uu hore ula joogay.
Lewandowski ayaa sare u qaaday ciyaartiisa heer cusub intii lagu jiray ololihii 2020/21, isagoo dhaliyay 41 gool 29 kulan oo Bundesliga ah si uu u jabiyo rikoorka ugu dheer ee Gerd Muller ee gooldhalinta ugu badan hal xilli ciyaareed oo horyaalka Jarmalka ah.
21/22 wuxuu sameeyay qaab la mid ah Lewandowski ; waxa uu haatan dhaliyaa gool kulan kasta oo Bundesliga ah waxaana uu leeyahay 13 tartamada oo dhan 10 kulan oo uu saftay.
Dad badan ayaa saadaaliyay in Pole uu ku guuleysan doono Ballon d’Or sanadka 2020, kaliya France Football ayaa ku dhawaaqi doonta inaysan jiri doonin xaflad ay sabab u tahay duruufaha gaarka ah iyo xaalada Corona ee Xiligan.
“Suurtagalnimada ku guuleysiga Ballon d’Or micno weyn ayay iigu fadhidaa, waxay iga dhigeysaa inaan dareemo sharaf, haddii aad tixgeliso dhammaan wixii aan ku guuleystay sannadkan oo keliya, laakiin sidoo kale sannadkii hore, in xafladda la baajiyay, waxaan ku guuleystay koobab badan , Waxaan dhaliyay goolal badan, ”ayuu yiri Lewandowski, u sheegay Marca .
Previous articleCiidamada Puntland iyo rag hubeysan oo ku dagaalamay xalay magaalada GAROOWE
Next articleRaheem Sterling oo Sharuud ku xiray Heshiiskiisa Cusub ee Kooxda Manchester City
Liverpool 2-2 Manchester City, labada Kooxood oo ku heshiiyay Qeybsiga Dhibcaha
Liverpool ayaa Garoonkeeda Anfield ku soo dhaweesay Kooxda Manchester City kulan ku soo dhamaaday barbaro 2-2 oo halis la galshay Kooxda City. Liverpool...
Mauricio Pochettino oo ka hadlay go’anka PSG ee ku aadan Mustaqbalka...
Real Madrid oo ogaatay qiimaha ay ku heli karto Xidiga Aurelien...
Erdogan oo arrin xasaasi ah ku eedeeyey la-taliyaha Biden
XOG: Ra’iisul wasaare Rooble oo u baxayo safar dibadda ah +...
DEG DEG: Kenya oo soo saartay go’aano waali ah kahor xukunka...
Mohamed salah oo ku guulaystay xiddigii ugu fiicnaa taageerayaasha PFA ee...